2011-11-06 ~ Myanmar Express
ကဲဗျာ ပြောတဲ့လူတွေက ပြောကုန်ကြပြီ၊ ပထမ BBC News ကနေ အငြင်းပွားဖွယ် မြေပုံကို တင်တယ်.... အားလုံး ၀ိုင်းကန့်ကွက်တော့ ပြန်ပြင်ထားတဲ့ မြေပုံကိုတင်တယ် ဒါပေမဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် အချက်ကို မဖြုတ်ဘူး။ ပထမ အငြင်းပွားဖွယ် မြေပုံတင်လို့ ပြည်သူပြည်သားတွေကို ဂရုမစိုက်တဲ့အနေနဲ့ ဘာမှ ဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားဘူး။ ဘီဘီစီ ကို မဝေဖန်ချင်တောင် အဲ့ဒိအပေါ်မှာရှိတဲ့ ခင်ဗျားတို့အမြင်၊ ပြည်သူပြည်သားတွေ ဒီလောက် ဆန္ဒပြနေတာကို သတင်းလေးအဖြစ်နဲ့တောင် ခင်ဗျားတို့ မရေးနိုင်တာ ဘာတွေများ ကြောက်နေကြလို့ပါလဲဗျာ... ပြည်သူတွေကို ထစ်ခနဲရှိ လမ်းပေါ်ထွက်ခိုင်းနေတဲ့ အမေရိကားက နိုင်ငံရေး အန်တု အုံကြွမှု ဆရာကြီးလည်း ငြိမ်နေပါရော့လား.... ခင်ဗျားတို့ ဖြေရှင်းတာလေး ပြည်သူတွေ တော်တော် ကြားချင်ကြတယ်ဗျာ.... DVB entertainment, RFA Burmese, VOA Burmese Fan Page, Mizzima - News in Burmese, The Irrawaddy (Burmese Version),By James MmtKo Pyae ပြောတော့ ပြည်သူ့အသံနားထောင်သလေးဘာလေးနဲ့....ဒီမြေပုံက ဘယ်ကလေးဆွဲထားတာလဲ...ငါတို့နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား ၇ မျိုးနဲ့ ဗမာလူမျိုးဆိုတာပဲရှိတယ်...သူများနိုင်ငံသွားနေပီး သမိုင်းကိုမေ့နေပီ ထင်တယ်....ငါလည်းမတတ်ပါဘူး...နလပိန်းတုန်းအမြင်နဲ့ပြောနေတာ သာမာန်လူတန်းစားတောင် လက်မခံနိုင်တဲ့အချက်ကို ဒီမိုကရေစီ နာမည်ခံနေတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေက ပြောနေတယ်....ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ကောင်းတယ် BBCTun Kyaw ဒီမိုကရေစီသဘောအရ ပြောခြင်းမပြောခြင်းသည် မိမိအပေါ်မှာပဲမူတည်နေလေတော့ သူတို့မပြောချင်လို့ကိုမပြောတာနေမှာပါ။ သမိုင်းပေးတာဝန်တို့ ပထ၀ီပေးတာဝန်တို့ကို လျစ်လျူရှုတာလည်းပါသပေါ့Nyein Moe Yes, I also still wait and looking to this America demo Sayagyi , no say anything until now. Thanksalittle bit to RHG case,We can see that who's real love for the motherland and who are revolution to the anti-gov for the money.Lay Pyay Soe ဒီလိုနဲ့ သူတို့အတွက် ဂွင် တွေ ပျောက်ကုန်ခဲ့တယ်လေ ... ရွေးကောက်ပွဲကလည်း အောင်မြင်၊ လွှတ်တော်ကလည်း အတည်ဖြစ်၊ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကလည်း ရပ်တန့်၊ အကျဉ်းသားတွေကလည်း လွတ်မြောက်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း တည်ဆဲ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း ဆွေးနွေး ...... ဟော ဂလိုနဲ့ လက်ညိုးထိုးစရာက မရှိ ...... ဘယ်သူ့ကို လက်ညိုးထိုးလို့ ဘယ်လို သနားအောင် ပြောပြီး မျက်ရည်ထိုးခံ ဒေါ်လာဖန် ရမှန်းမသိတော့ ..ခုကျတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပဲ ။။။။ ဇာတ်လမ်း အသစ် လှုပ်ရှားမှု အသစ်ပေါ့လေ ..ဒါပေမယ့် ရှင်းပါတယ် ဒီပြသနာမှာ ဘယ်သူက မိမိတိုင်းပြည်၊ မိမိလူမျိုး၊ မိမိ အမျိုးဘာသာ သာသနာနဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ပိုမို ချစ်မြတ်နိုးသလဲ တစ်ကယ့် စိတ်ရင်းနဲ့ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းလား ခပ်ပါးပါးလေး ချစ်မြတ်နိုးခြင်းလား ခု ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာက သက်သေပြပါလိမ့်မယ် ...... စားပါ ယူပါ စကားလုံးကြီးကြီးပြောပါ ..လူသားခြင်း စာနာတာတို့ လူ့အခွင့်အရေးတို့ ပြောကြစမ်းပါ ရတယ် ပြော ဒါပေမယ့် အလုံးကြီး ပြောရင် တစ်ခါတစ်လေ မနိုင်မနင်းနဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ လုံးထွေးပြီး ဆို့ နေတတ်တယ် ပြီးတော့ အစားကြီး မိရင်လည်း အပင်းဆို့သလို မနိုင်မနင်းနဲ့ သေတတ်တယ် သတိထားကြပါ ... သိပ်ကို သနားနေတယ် သိပ်ကို စာနာနေတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်ပေါ် ခေါ်တင်ပြီး ထမင်းကျွေး ထားလိုက် .. ဘာမှန်းမသိတဲ့ လူတွေကို လက်ခံလိုက်ရအောင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာ နိုင်ငံတကာ သာလာယံ ဇရပ် မဟုတ်ဘူး ...........သိပ်သနားနေရင် အဲဒီ အင်္ဂလန်တို့ အမေရီးကား တို့မှာ တရားဝင် လက်ခံ လိုက်ကြ ..... BBC ဆိုတဲ့ ဟာတွေ နိုင်ငံတကာ သတင်း မီဒီယာ ဆိုလို့ စောင့်စည်းလိုက်ကြတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်တွေ ..သူများ အချုပ်အခြာ အာဏာတည်တဲ့ တိုင်းပြည် မြေပုံကို လက်လွတ်စပယ် ဆော်ကားပြီး အပိုင်းပိုင်းလုပ်ပြထားတယ် ..အဲဒီ အင်္ဂလန်မြေပုံကိုလည်း ကျုပ်တို့က အဲသလို အစိတ်စိတ် အမွှာ မွှာ အပိုင်းပိုင်း ရေးပြမယ် ဆိုရင် ကျေနပ်ကြမလားပြော ....................... မပြောဘူး မပြောဘူး နဲ့ နေတာပါ ခုဟာက အချုပ်အခြာအာဏာကို တံတွေး လာဆွတ်သလို ဖြစ်နေတယ် ......အဲဒီ လေသံကြီးသလောက် အပင်းဆို့ နေတဲ့ သောက်မြန်မာတွေ ကိုလည်း လီးပဲ ..ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ ခွေးကောင်တွေကိုလည်း လီးပဲ ..... BBC ဆိုတဲ့ အကွက်ကျကျ အကြံကြီးတဲ့ အောက်ကြေးနှိုက်မယ့် ခွေးသားတွေကိုလည်း တင်းတယ် တင်းတယ် တောက် !Myanmar Express
အော်... အောင်ဆန်း... အောင်ဆန်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို အစိုးရ အဆက်ဆက်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးအောင်ဆန်း လို့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မနှစ်မြို့သူတွေကလည်း ဒီလိုပဲ ခေါ်ခဲ့သလို တခြား ပြည်သူပြည်သားအားလုံး၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အရာရှိများအားလုံးနဲ့ တပ်မတော်သားအားလုံးကပါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်အောင်ဆန်း၊ သခင်အောင်ဆန်း၊ ဦးအောင်ဆန်း ဆိုပြီးပဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာ ဒီနေ့အထိပါတယ်။ အောင်ဆန်း လို့တော့ ဘယ်သူမှ ခေါ်ခဲ့တာ အရင်တုန်းက မတွေ့ခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုတော့ တွေ့နေရပါပြီ။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် (ခေါ်) လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ကို အောင်ဆန်းလို့ အခုချိန်မှာ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြသူတွေကတော့ အရင် တုန်းက အဖေ၊ အဖေ လို့ခေါ်နေတဲ့ အတိုက်အခံ တွေထဲကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ http://burma.irrawaddy.org/archives/2186 မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူအများက ဧရာဝတီဘလော့ကို အလွန်တင်းမာနေကြပါတယ်။"နာမည်ယူထားတာက ဧရာဝတီ လုပ်ပုံက မိုက်ရိုင်းလွန်းသည်၊ အောက်ပါသတင်းတင်ပြချက်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပါ အလွန်ကိုဆိုးဝါးလွန်းသည့်အပြင် ပြောရန်ဝေါဟာရပင်မရှိတော့ပါ။ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး နှင့် လူ.အခွင့်အရေးများအတွက် မည်ဆို.မည်ပုံလုပ်ဆောင်ပါမည်ဟု အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစည်းရုံးလျက် နည်းပညာ၊စက်ကရိယာများနှင့် ငွေကြေးအထောက်အပံတွေရယူထားပြီး လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေကျခံနေသူတွေသာ ကျခံနေကြရ၊ ဘ၀တွေ မိသားစုတွေ ဒုက္ခဖြစ်နေလည်း၊ သူတို.တွေဟာ ပြည်ပမှာ ဟိုနိုင်ငံသွားလိုက် ဒီအစည်းအဝေးတက်လိုက်နဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးတို.၊ ဒီမိုကရေစီရေးတို. အသံကောင်းဟစ်နေကြတာပါ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ပြည်ပမီဒီယာသမားတွေ စားသောက်နေထိုင်နိုင်မှုဟာ ပြည်တွင်းက ယုံကြည်ချက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတွေရဲ. ကျေးဇူးတွေပါ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ထမင်းရှင်တွေပါ။""အခုတော့ အမျိူးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ( အောင်ဆန်း ) လို.တောင် မိုက်ရိုင်းစွာရေးသားလာကြပါပြီ၊ ကြည့်လေ ဒေါသထွက်လေ ခံစားရလေပါ၊ သူတို.ပြောနေ အော်နေတဲ့ ဆန်.ကျင်ဘက်ဆိုတဲ့ အဖွဲ.အစည်းကတောင် အောင်ဆန်းလို.မခေါ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို.သာ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာပါ။""ကဲ....... နိုင်ငံကိုချစ်ကြသော အမျိုးဂုဏ်ကိုလေးစားကြသော ကျွန်တောတို.ညီအကိုမောင်နှမများခင်ဗျား- ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အောင်ဆန်းလို.သတင်းဖော်ပြချက်တပ်ထားသော ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းခိုင်းကြမှာလဲ .................................."ဆိုပြီး http://burma.irrawaddy.org/archives/2186 , http://www.deyea.org/2011/11/blog-post_11.html , http://www.ngunngemoe.net/2011/11/blog-post_12.html , http://www.hrmyanmar.info/2011/11/blog-post.html တွေအပြင် တခြား အတိုက်အခံ ဘလော့တွေ မှာနဲ့ facebook စာမျက်နှာတွေမှာ အလွန်မိုက်ရိုင်းသောသတင်းတင်ပြချက်။ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး တစ်ဦးက MEG အခုလိုပြောပါတယ်"ဘာကြောင့် ဒီလိုရေးတာလည်းဆိုတာတော့ စဉ်းစားလို့မရဘူး... မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးက အတိုခေါ်ရင်တောင် ဗိုလ်ချုပ်လို့ပဲ ခေါ်ကြတာ... အောင်ဆန်း လို့တော့ ဘယ်လိုလူကမှ မခေါ်ဘူး... အခု ဧရာဝတီ ရဲ့ လုပ်ပုံက တခြားပြည်သူတွေပြောသလိုပဲ အလွန်မိုက်ရိုင်းပါတယ်.. ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ ဒေါ်စုက ခုချိန်မှ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်ဖြစ်နေတယ်... ပါတီကိုမှတ်ပုံမတင်ဘူးပြောပြီး ပြန်တင်ပြန်တယ်.. ဒေါ်စုခေါင်းဆောင်တဲ့ NLD ကလည်း ရည်မှန်းချက်တိတိကျကျမရှိဘူး... အရင်တုန်းက တစ်မျိုး၊ ခုတစ်မျိုး ပြောလိုက် လုပ်လိုက် ဖြစ်နေတယ်.... ဒါကိုမကျေနပ်လို့ ဒေါ်စုအဖေ ကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းခေါ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်..."လို့ပြောပါတယ်။ဘီဘီစီ ရဲ့ သတင်းလိမ်မှုကြောင့် ဘီဘီစီကို မြန်မာလူထုက တောင်းပန်ခိုင်းတုန်းကလည်း ဘီဘီစီက မတောင်းပန်တဲ့အပြင် facebook ပေါ်မှာ comment သီးသန့်ရေးလို့မရအောင် ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူကြားက ပြည်သူ့အသံတွေ နဲ့ တိုင်ကြားစာတွေကို လုံးဝလက်မခံခဲ့ပါဘူး။အခု ဧရာဝတီဘလော့မှာလဲ ခေါင်းစဉ်အောင်မှာ ပြထားတဲ့ comment အရေအတွက်က အများကြီး ရှိပေမယ့် ဖော်ပြထားတာကတော့ နည်းနည်းလေးပဲ ရှိပါတယ်။"ကျွန်တော် ကွန်းမန့်ပေးတယ်.. ဖျက်ခံရတယ်.. ဆဲတာမပါဘူး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်တာ မပါဘူး... ဒါပေမယ့် အမြဲဖျက်ခံရတယ်..." လို့ သတင်းဖတ်သူတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ပြည်ပအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေ၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ ဘလော့တွေ အားလုံးဟာ သူတို့တွေကို ထိ တဲ့ ဝေဖန်စာတွေကို ဖျက်ပစ်တာတွေ၊ မတင်တာတွေ အမြဲလုပ်ကြပါတယ်။ဧရာဝတီဘလော့က ထောက်ပံ့ကြေးယူပြီး အလုပ်လုပ်နေသူတွေကတော့ ဘာမှ တစုံတရာ ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အောက်မှာ လာပေးတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မကြေနပ်ချက်တွေကိုတော့ ဆက်တိုက်ဖျက်နေပါတယ်။Myanmar Express
KIA သတင်း (ပေးစာ - ၄၇)
admin ခင်ဗျား ကျွန်တော်ကတော့ ဗန်းမော် မှာနေထိုင်တဲ့ ကချင်မျိုးချစ် လူငယ် တဦးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့လေးဟာဆိုရင်အရင်ကတော့ အရမ်းကိုစည်ကားတဲ့ မြို့လေးတမြို့ပါပဲ။အခု လို စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ အတွက် အရင်ကလောက်သွားရလာရတာဟာ ကျီးလန့်စာစား တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်နဲ့သွားလာနေရပါတယ်။ အခုလဲ ကေအိုင်အေ က အမိန့်တခုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပြန်ပါပီ။ယခုပေးပို့လာသော ဖိုင်အား admin web page မှာလိုသလို ဖော်ပြပေးပါလို့ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ အကူအညီတောင်းပါတယ်ဗျာ။နောက်လဲ ကေအိုင်အေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သတင်းများရရှိလာရင်လဲ ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပို့သွားပါဦးမယ်ခင်ဗျား။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတော့ စစ်အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အေကြားမှာ အမြန် ဒီပြသနာတွေကိုပြီးစေချင်နေကြပါပီ။ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် အင်ခွန်နော် (မျိုးချစ် ကချင်လူငယ်)KIANew Myanmar Express
ရုရှားမှ မြန်မာကျောင်းသားများ အဆောင်မှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နေသည် ဆိုသည့် သတင်း မမှန်ဟုဆို
ရုရှားနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ပညာတော်သင် ကျောင်းသားများ စည်းမဲ့၊ ကမ်းမဲ့ စည်းပျက်၊ ကမ်းပျက် နေထိုင်မှုကြောင့် အဆောင်မှ ထွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခံရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများနေတဲ့ အဆောင်မှာ အချိန်အတော်ကြာ နေခဲ့ဖူးတဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံမှ အမည်မဖော်လိုသူ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ သူမဟာ ရုရှားနိုင်ငံကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပညာတော်သင်ကျောင်းသားတွေနေတဲ့ အဆောင်က အခန်းမှာပဲ တစ်လနီးပါး နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။"ဒီသတင်းက ထုံးစံအတိုင်း ကောလဟာလဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရုရှားကိုရောက်ဖူးပါတယ်၊ အဲဒီအဆောင်တွေပေါ်မှာနေဖူးပါတယ် မြန်မာကျောင်းသားတွေ အဆောင်မှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နေကြတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူးရှင်... အားလုံးက ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး စည်းကမ်းရှိရှိ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာ ကျွန်မ မျက်မြင်ပါပဲ.." လို့ သူမက ပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကို ပညာတော်သင် သွားရောက်နေသော မြန်မာကျောင်းသား တစ်ဦးကို မေးကြည့်ချိန်မှာတော့.. ပညာမဲ့ အတိုက်အခံ မီဒီယာတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မနာလိုဝန်တိုမှုတွေကြောင့် သက်သက်အသရေဖျက်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း.. အခုလို ပြောပါတယ်။"ဒါက ဒီနေ့ ပညာမဲ့အတိုက်အခံတွေ အမြဲလုပ်နေကြ အလုပ်ပါ။ အရင်တုန်းကလည်း ဒီလို အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ စွပ်စွဲကြဖူးပါတယ်။" လို့ ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင် အဲဒီ ပညာတော်သင်ကပဲ အရင်တုန်းက တပ်မတော်က နိုင်ငံ့ဦးသျှောင်ဖြစ်နေချိန်မှာ နိုင်ငံရေးမှာလည်းဘာမှမပတ်သက်မှုမရှိပဲ ကိုယ့်ဘာကိုယ်အေးအေးဆေးဆေး ပညာသင်ယူနေတဲ့ ရုရှားက ပညာတော်သင်တွေကို ပုတ်ခက်ရေးသားတာကို နားလည်နိုင်ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ တပ်မတော်ကလည်း သူ့လမ်းသူလျှောက်နေချိန်ဖြစ်ပြီး ရုရှားက ပညာတော်သင်တွေကလည်း နိုင်ငံအတွက် အဆင့်မြင့် ပညာတွေကို သင်ယူနေတာကလွဲပြီး ဘယ်ထဲမှ ဝင်မပါတာကြောင့် အခုချိန်ထိ လိုက်ပြီး အသရေဖျက်နေတာကို နားမလည်နိုင်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။အမျိုသမီးဝတ်စုံတွေနဲ့ ဝတ်စားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း"မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတောင် အမျိုးသမီးအဝတ်အစား ဝတ်ပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိနေတာပဲ... ရုရှားနိုင်ငံမှာ မြန်မာအမျိုးသမီး ပညာတော်သင်မှ မရှိတာ.. ဒါမျိုးက မထူးဆန်းပါဘူး..." လို့ ပြောပါတယ်။မြန်မာမိန်းခလေးတွေ အများကြီးရှိနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင် ကပွဲမှာ ယောင်္ကျားက မိန်းမအဝတ်အစားဝတ်အဆောင်စည်းကမ်းဖောက်မှုကြောင့် ရုရှားနဲ့ မြန်မာ ပြဿနာ တက်တာတွေ ရှိဖူးလားလို့ မေးချိန်မှာတော့"ဟိုးအရင် အပတ်စဉ်တွေတုန်းကတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်... မြန်မာတွေကလည်း ရုရှားတွေရဲ့ သဘာဝတွေကို ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးချိန်နဲ့ ရုရှားတွေကလည်း မြန်မာတွေရဲ့ ထုံးစံတွေကို နားမလည်ချိန်မှာပေါ့... ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းတော့ မရှိတော့ပါဘူး.... အခုဆိုရင်တော့ လုံးဝ မရှိသလောက်ပဲ... အခုမှ ရုရှားကို စလွှတ်တာမှ မဟုတ်တာ.. ကြာနေပြီလေ.. သူတို့ပြောသလို အဆောင်ကထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခံရမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး အသုတ်ကတည်းက ဖြစ်သင့်တာပေါ့... အခုတော့ ဟာသကြီးဖြစ်နေတယ်..." လို့ ပြောပါတယ်။သံရုံးကနေ သတိပေးတာတွေ ဘာတွေ ရှိသလားလို့ မေးချိန်မှာတော့"ဒီနိုင်ငံမှာက စင်္ကာပူတို့၊ မလေးရှားတို့လို တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူဘူးဗျ။ ဒီမှာက ကျွန်တော်တို့ ပညာတော်သင် ကျောင်းသားတွေနဲ့ သံရုံးကလွဲရင် မြန်မာမရှိဘူး... ပြီးတော့ ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်း ၃ ၊ ၄ နှစ်နေမှ ပြန်ရတာဆိုတော့ သံရုံးက လူကြီးတွေကပဲ မိဘလို၊ ဆရာလို သွန်သင်စောင့်ရှောက်လာတာဆိုတော့ တွေ့တိုင်း လိမ်လိမ်မာမာနေကြဖို့၊ စာကြိုးစားကြဖို့၊ စည်းကမ်းလိုက်နာကြဖို့၊ မျိုးချစ်စိတ်ရှိကြဖို့ အမြဲပြောတယ်ဗျ... ဒါက ရေးကြီးခွင့်ကျယ် လုပ်ရလောက်အောင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး..." လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူကပဲ သူတို့အဆောင်မှာ တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။"တစ်ခါတုန်းကတော့ အဆောင်ဒါရိုက်တာ ရုရှားနဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတစ်ချို့ အဆောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်လို့ ဆိုပြီး ပြဿနာ တက်ဖူးတယ်ဗျ... အဲဒီ မြန်မာကျောင်းသားဆီကို တခြားနိုင်ငံက မြန်မာမ တစ်ယောက်ရောက်တာတုန်းကပါ... အဲဒီ မိန်းခလေးက အတိုက်အခံထဲကပဲထင်တယ်... သူလာတုန်းက ငပိတွေ ဘာတွေ ယူလာပြီး ချက်စားတော့ ပြဿနာတက်တာပဲ... ဒါမျိုးပြဿနာက တခြားနိုင်ငံက မြန်မာတွေလည်း မကြာခဏ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာပါ... ရုရှားမှာတော့ ငပိ ကို ဝယ်လို့ မရဘူး.. တခြားနိုင်ငံတွေလို မြန်မာဆိုင်၊ ကုလားဆိုင်လည်း မရှိဘူးဆိုတော... အဆောင်မှာ ပြဿနာ တက်စရာ ခေါင်းစဉ်ကို မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်..." လို့ အဲဒီ ပညာတော်သင် ကပဲ ဆက်ပြောပါတယ်။ရုရှားရောက် ပညာတော်သင် ကျောင်းသားအားလုံးဟာ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ လေ့ကျင့်မှု အောက်ကနေ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာကြောင့် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ဘယ်တော့မှ မနေကြကြောင်းနဲ့ ဒီမိုဝေယံနှင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရုရှားက ပညာတော်သင်တွေကို မနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်နေကြတဲ့ တခြားအတိုက်အခံတွေအနေနဲ့ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးပါတဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာတွေကို သင်ကြားနေတဲ့ ပညာတော်သင်တွေကို ဝေဖန်ပုတ်ခက်မယ့် အစား ကိုယ်တိုင် အတက်ပညာ တစ်ခုခု စည်းပူးနေသင့်ကြောင်းလည်း မှာကြားသွားပါတယ်။ပြီခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲမှာပဲ ဒီမိုဝေယံဘလော့မှာ ဦးကျော်ဆန်းနဲ့ ဝန်ကြီး ၅ ဦး ပြုတ်တယ်လို့လည်း မကြာခင်က မဟုတ်မမှန် သတင်းရေးခဲ့တာကြောင့် လူအများက တင်းမာမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး အရေးပါ မှတ်သားလောက်စရာ တွေတင်သည့် ဒီမိုဝေယံဘလော့Myanmar Express
သမိုင်းထဲက သူရဲကောင်းတွေက ဒီကနေ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ လှောင်ပြောင်ဖို့မဟုတ်ဘူး (ပေးစာ - ၄၆)
facebook ပေါ်က လူတော်တော်များများဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ပုံမျိုးတွေ အများကြီး ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ လွန်စွာပဲ တုန်လှုတ်ချောက်ခြားမိပါတယ်။ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဧရာဝတီ သတင်းဘလော့ကနေ ရတယ်လို့ သိရပြန်တယ်။ ဒီနေ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပါလား။ သတင်းဌာနတွေနဲ့ အတိုက်အခံတွေကလည်း အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်ရရင်ပြီးရော ဆိုပြီး လုပ်ချင်တိုင်းကိုလုပ်နေကြတယ်။ သမိုင်းကိုလည်း ထည့်မတွက်ကြဘူး၊ လေးလည်းမလေးစားကြဘူး။ အတိုက်အခံတွေက တကယ်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းနေပြီ။အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်နဲ့ အလောင်းမင်းတရား ကြီးတို့ ရုပ်ထုတွေကို အစိုးရက မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ အစိုးရလုပ်သမျှ ဆန့်ကျင်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ လုပ်နေသမျှတော့ ဆန့်ကျင်ရေးသမားပဲဖြစ်မယ်။ မီဒီယာသမားလည်း ဖြစ်မလာသလို နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဖြစ်လာဘူး။ အဲလိုလူမျိုးတွေကိုလည်း အထင်မကြီးကြနဲ့။အသက်ငယ်တဲ့လူတွေက လုပ်လို့၊ အသက်ကြီးတွေက တားရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး။ တစ်ခါတုန်းကလည်း http://nge-naing.blogspot.com/2011/07/blog-post_14.html မှာ အသက် ၄၀ ကျော် အမျိုးသမီးကြီးလုပ်နေပြီး ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာကို သူ့နာမည် တပ်ပြီး ဗေဒါလမ်း လို့ပေးထားတာတွေ့တုန်းက ဝင်ပြောမိသေးတယ်။ ဒီနေ့အတိုက်အခံတွေလုပ်မှပဲ သမိုင်းက သူရဲကောင်းတွေလည်း ကာတွန်းဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး ကဗျာတွေက ဟာသ တွေ ဖြစ်ရတယ်။ တကယ်စိတ်ပျက်တယ်။ သိတဲ့ တတ်တဲ့ လူတွေကလည်း လက်လှမ်းမှီသလောက် ထိန်းကြပါအုံး။အစိုးရက အာဇာနည်နေ့ကို အရင်လိုခမ်းခမ်းနားနား မကျင်းပရင်တောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ထုတွေကို ပြုပြင်နေတာတွေ တွေ့နေရတယ်။ ဘယ်အစိုးရဘက်တော်သားကမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို ကာတွန်းမဆွဲဘူး။ မလှောင်ပြောင်ကြဘူး။ အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျန်စစ်သား မင်းကြီးကို လေးစားတယ်ပြောလို့ ဘယ်စစ်ဗိုလ်ကမှ ကျန်စစ်သား ပုံကို ကာတွန်းမဆွဲဘူး၊ မလှောင်ပြောင်ဘူး။ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အသိပညာအဆင့်အတန်း ဘယ်လောက်ကွာတယ်ဆိုတာ အဲဒီမှာ သက်သေပြတာပဲ။ အဲဒီလို အတိုက်အခံတွေကို စစ်ဗိုလ်လေးတွေရဲ့ ချီးပဲကျွေးသင့်တယ်။ ဒေါသဖြင့်ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် Myanmar Express
KIAတပ်ဖွဲ့များထောင်ထားခဲ့သောမိုင်းများနင်းမိ၍ ရွာသားများ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွား၍ ကချင်လူငယ်များ၏ အနာဂတ်ဘ၀ကိုKIA တပ်မတော်ကဖျက်ဆီးနေ
၀ိုင်းမော် နိုဝင်ဘာ ၇ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA)အနေနဲ့ အစိုးရတပ်တွေ သွားလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာ မိုင်းတွေအဆက်မပြတ် ထောင်လျက် ရှိနေပါတယ်။ အစိုးရတပ်တွေ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထောင်နေတာ ဖြစ်ပေမဲ့ အစိုးရတပ်တွေ မလာခင်စပ်ကြားမှာ ဒေသခံပြည်သူတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သွားလာနေကြပါတယ်။ ထင်းခွေ၊ ရေခပ်၊ တောင်ယာ လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက်လျက်ရှိပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေး ကိစ္စရပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုသွားလာရင်း KIAတပ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးပြီး KIA တပ်ထဲကိုခေါ်သွားပါတယ်။အသက် အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေဆိုရင်တော့ ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းပါတယ်။မိန်းမချောချောလှလှလေးတွေတွေ့ရင်လဲတစ်ခါထဲခေါ်သွားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရတဲ့ရွာသူ ရွာသား တွေအတွက်တော့ KIA ဟာ တကယ့်ကိုအလွန်တရာကြောက်စရာကောင်းလှတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လိုပါပဲ။ နိုဝင်ဘာလ ၄ရက်နေ့ကလဲ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ၀ူယန်ကျေးရွာကရွာသား(၂)ဦးမိုင်းထိတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရွာကရွာသားတွေဖြစ်တဲ့လဂွမ်ဒေါင်ဇောင်းနဲ့လ၀ါဒေါင်ခေါင်းတို့နှစ်ဦးဟာ ၀ူယန်ရွာရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မှာထင်း ခုတ်ဖို့ အသွားKIAထောင်ထားတဲ့မိုင်း တစ်လုံးကိုနင်းမိပြီးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။လဂွမ်ဒေါင်ဇောင်း(၂၈)နှစ်က ဘယ်ဘက်ဒူးအောက်ခြေသလုံးရိုးသွားပြီးလက်ဝဲလက်ခလယ် ကျိုးသွား ခဲ့ပါတယ်။ လ၀ါဒေါင်ခေါင်း(၃၃)နှစ်ကတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမိုင်းစတွေထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကို ၀ိုင်းမော် ဆေးရုံကနေတဆင့်မြစ်ကြီးနားဆေးရုံကိုဆက်ပြီးပို့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ၀ူယန်ကျေးရွာတစ်ရွာ လုံးကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ မိုင်းတွေနေရာတကာမှာထောင်ထားတဲ့KIAတပ်တွေကို လည်းရွံရှာမုန်းတီးလျက်ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့(၂)ဦးဟာလူငယ်လေးတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကချင်လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေသလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝူယန်ကျေးရွာကခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ပြောဆိုပါတယ်။
သတင်းလိမ်မှုများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှသံရုံးရှေ့တွင် ဘီဘီစီ ကို ဆန္ဒပြရန် လူစုခဲ့ကြ
နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မနေ့က နေ့လည် ၁ နာရီခွဲမှာ လူငယ် အယောက် ၁၅ ယောက်တည်း မနည်းတဲ့ လူတစ်စုကို ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှသံရုံးမျက်နှာချင်းဆိုင် ကားလမ်းဘက်မှ ဆန္ဒပြရန် စုရုံးခဲ့ကြတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘီဘီစီ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရှိစဉ်ကတည်းက၊ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက မြန်မာပြည်သူတွေ အပေါ်မှာ သဘောထားမမှန်ခဲ့ကြကြောင်းနဲ့ ဘီဘီစီက မြန်မာဝန်ထမ်းတွေက ပိုက်ဆံရဖို့ကိုပဲ ခေါင်းထဲမှာ ရှိပြီး တိုင်းပြည်အတွက် စိတ်ဓာတ်လုံးမရှိတဲ့ အကြောင်းသတင်းတွေ ဒီရက်ပိုင်းမှာ အမြောက်အများ ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက် အခုလို ဆန္ဒပြဖို့ လူစုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဘီဘီစီကို ရှက်တတ်ဖို့၊ သတင်းလိမ်မှုတွေအတွက် တောင်းပန်ဖို့၊ မှားနေတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေ ပြန်ဖြုတ်ဖို့ကို ဘီဘီစီရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ပြည်သူ အများက တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ စတုတ္ထမဏိုင်ကြီး ဘီဘီစီက facebook wall မှာ ဘီဘီစီကလွဲပြီး တခြားလူတွေ သီးသန့် comment ပေးလို့မရအောင် ပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့ စုဝေးနေသူများ (ဓာတ်ပုံ - Yangon Press International) ဆန္ဒပြဖို့ လူစုလာသူများထဲမှ ကိုစစ်ငြိမ်းအေး က “ ကျွန်တော်တို့က ဒီသံရုံးက တဆင့် ဘီဘီစီ သတင်းဋ္ဌာနကိုပြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ရခိုင်ပြည်မှာ နေလာတာ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီနေပြီ၊ တောင်းဆိုချင်တာက ဘီဘီစီက မြန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင် တောင်းပန်ပါ။ အဲဒီသတင်းရေးတဲ့ သတင်းထောက် အန်နာဂျုံးကို အလုပ်ဖြုတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ ဆန္ဒပြဖို့ စီစဉ်သူများသည် အောဟစ်ခြင်း၊ ကြေညာစာတန်းများ ကိုင်ဆောင်ခြင်း ပြုလုပ်သည်ကို မတွေ့ရှိရပဲ နေ့ခင်း ၂ နာရီတွင် လူစုခွဲသွားကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဆန္ဒပြရန် စုဝေးနေသူများကို ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင်နေ့လည် ၁နာရီခွဲဝန်းကျင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Yangon Press International) ဆန္ဒပြဖို့ စုရုံးသူများထဲမှာ သံဃာတော်များလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ဘီဘီစီ ကို မကျေနပ်သူများရဲ့ ပြောဆိုချက်များကိုတော့ ဒီနေရာ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားအားလုံး လူထုချဉ်ဖတ်ဖြစ်တော့မယ် (ပေးစာ - ၄၅)
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် လတ်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေသစ်ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပျော်ပျော်ပါးပါးဝင်နွှဲခဲ့လို့ ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) မြိုးမြိုးမြတ်မြတ် သဲ့ယူသွားတယ်ဆိုပြီး ဟိုးလေးတကြော် NDF ဦးခင်မောင်ဆွေက“ဘ၀င်မကျဘူး၊ ထူးထူးခြားခြား ဘာမှ မပြောင်းလဲပါဘူး” တဲ့။၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအောက်က သွားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှန်သမျှ စစ်ကျွန်ဘူတာဆိုက်မှာဘဲ ဆိုတဲ့ ရဲရဲတောက် NLD ဦးဝင်းတင်က “လက်ခံနိုင်တယ်၊ အများကြီးလိုက်လျောခဲ့တယ်” တဲ့။ကပေါက်တိကပေါက်ချာတွေ...။ဒီလိုသာ ကြပ်ကြပ်လုပ်... ပါတီနိုင်ငံရေးသမားအားလုံး လူထုချဉ်ဖတ်ဖြစ်တော့မယ်။တစ်ဆက်တည်း... လူထုနိုင်ငံရေးကို လူထုကြီးက တစ်နေ့ တောင်းဆိုလာလိမ့်မယ်။PETER UREmr.peterure@gmail.com
ဘွန်တောင်စခန်း..မြန်မာတပ်ကသိမ်းပိုက် Myanmar Express
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကမ္ဘာကြီးကို စောင့်လျှောက်ဖို့ အတွက် ဆန္ဒပြ သင့်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေကာတာ ၆ ခု
ကမ္ဘာ့ ဆဌမမြောက် အကြီးဆုံးဆည် (စပိန်နိုင်ငံ)Almendra dam (Spain)This dam was built near the village of the same name. The lake, which she formed covers an area of ??nearly 900 square miles. Dam height of 200 meters. ကမ္ဘာ့ ပဉ္စမမြောက် အကြီးဆုံးဆည် (ဂျော်ဂျီယာ)Inguri damLocated in Georgia. Despite the fact that the construction of the dam began in the 60s of last century, it was put into operation only 15 years ago. This dam is the highest arched concrete dam in the world, its height reaches 270 meters.ကမ္ဘာ့ စတုတ္ထ အကြီးဆုံးဆည် (အမေရိကန်နိုင်ငံ)Dam Dworshak (USA)This work of architects was built in just6years old. It is considered one of the highest dams in the western hemisphere - its height is 290 meters.ကမ္ဘာ့ တတိယ အကြီးဆုံးဆည် (အီရန်)Karun damOne of the most famous dams in the world. It is in Iran. The width of the dam - 160 meters, height - 205 meters.ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးဆည် (ဆွတ်ဇာလန်နိုင်ငံ)Dam Grande Dixence (Switzerland)Unique in that it retains water to formasmall stream flowing into the lake Lac des Dix, itself, the lake is huge and contains millions of cubic meters of water. The height of the lake above the sea level is 2364 meters.ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဆည်ကြီးHoover DamThis isahydroelectric power plant, located in Black Canyon, on the border of Arizona and Nevada, 48 miles southeast of Las Vegas. Named in honor of Herbert Hoover, 31st U.S. president, playedasignificant role in its construction.--Posted By ဒေါ်လာစား to Myanmar Express on 11/07/2011 07:11:00 PM
အမြဲတမ်းမှားနေတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က အတိုက်အခံတို့ရဲ့ သတင်းများ
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံက မနေ့က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မတူသလို ဒီနှစ် မြန်မာနိုင်ငံက မနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မတူအောင် ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေသာမကပဲ ကုလသမ္မဂ္ဂ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန် နဲ့ တခြား အနောက်နိုင်ငံတွေကပါ လက်ခံလာတဲ့အထိ တိုးတက်မှုတွေ ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မီဒီယာ ပိုင်းမှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ အများကြီးရခဲ့ပြီး အရင်းတုန်းက မပါတဲ့ စကားလုံးတွေ အခုတွေ့နေရပြီဖြစ်ကြောင်း မကြာခင်က ထောင်ကထွက်လာတဲ့ လူအများ ရှုံ့ချခြင်းခံနေရသော လူပျက် ဇာဂနာ ကတောင် ဝန်ခံခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဖက်က ပျောင်းလဲမှုတွေ ဘယ်လိုပဲလုပ်ဆောင်နေပေမယ့် မီဒီယာ သမားတွေကတော့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ လုံးဝ ပြောင်းလဲ ခြင်းမရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပအခြေစိုက် အတိုက်အခံ မီဒီယာတွေနဲ့ facebook နဲ့ ဘလော့ တွေပေါ်က ဝါဒဖြန့်သမားတွေကတော့ ဘာပြောင်းလဲခြင်းမှ မရှိပဲ ထုံးစံအတိုင်း ကောလဟာလတွေ လွှင့်လို့ကောင်းတုန်း၊ သတင်း ထက် အတင်းတွေကို ပြောလို့ကောင်းတုန်းပါပဲ။သတင်းမှားတွေ၊ ကောလဟာလတွေ အမြဲ လွှင့်နေမှုနဲ့ နာမည်ပျက်နေတဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက သူဘာသူနေတဲ့ အဆိုတော် မေဆွိ ကိုတောင် သေတယ်လို့ လွှင့်ခဲ့ဖူးပါဘယ်။ အခုတစ်ခါလည်း ဝန်ကြီး တွေ ပြုတ်ပါတယ်ဆိုပြီး သတင်းမှားတွေ ထပ်ပြီး လွှင့်ပြန်ပါတယ်။ ဧရာဝတီ သတင်းဌာန ကို ရပ်တည်နိုင်ဖို့ စာဖတ်ပရိတ်သပ်တွေဆီက အလှူခံထားရတာဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဧရာဝတီ သတင်းဌာန အနေနဲ့ စာဖတ်သူတွေအပေါ်မှာ လေးစားမှု မရှိပါဘူး။ သတင်းရှာပါဆိုရင် facebook ပေါ်တက်ပြီး တွေ့သမျှ ဟာ ယူလာပြီး တင်နေသလို ပေးစာ တွေ၊ အစိုးရသတင်းစာထဲက စာတွေနဲ့ ဂျာနယ် ပေါင်းစုံက စာတွေပဲ ပြန်တင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ရလာတဲ့ သတင်းကို မှန်လား မှားလားလည်း သေချာ စိစစ်မှု မရှိပဲ ပရိတ်သက်တွေ ခေါင်းထဲကို ရောက်သွားမယ့် သတင်းကို ဖြစ်သလို ထုတ်လွှင့်နေတာ ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဧရာဝတီ သတင်းဌာနရဲ့ အမြှော်အမြင်ကြီးမှုနဲ့ အမှားတွေကို ကြိုမြင်မှုကို ကျေးစေတမန်ဘလော့မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။" ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးတွေ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ မသန်စွမ်း အနုပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုကို ၁-၁-၂၀၁၁ရက်နေ့က ကြည့်ရှု အားပေးတဲ့ သတင်းကို ၂-၁၁-၂၀၁၁ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ထုတ်တဲ့ သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း နိုင်ငံ့တာဝန်နဲ့ ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ် နိုင်ငံကို သွားရောက်နေလို့ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းရဲ့ နေရာမှာ ခေတ္တ တာဝန်ယူပေးထားတဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ မြန်မာ့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးကို ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ခေတ္တပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးလို့ ဖော်ပြ လိုက်တဲ့ သတင်းကို အမြဲတမ်း လိမ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်ကြတဲ့ ပြည်သူကို လှည့်စားနေကြပုံစံအတိုင်း ဧရာဝတီ သတင်းဌာနနဲ့ ပြည်ပက သတင်းဌာနအချို့ ထင်ကြေးနဲ့ ရုတ်တန်း ရမ်းတုတ်ကြတော့တာပဲဗျာ။သူတို့ရဲ လန်ကြုတ် ဇာတ်လမ်းကလည်း ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဗျ။ ဘာတဲ့ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း ပြုတ်ပြီ၊ ဘယ်ပျောက်နေလဲ၊ ဘုန်းကြီးသွားဝတ်နေတယ် စတဲ့ မရေမရာ သတင်းတွေနဲ့ မီဒီယာ လောကတွင်း ဖွနည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖွကြတာ တော်တော် ရီစရာကောင်းတယ်ဗျာ။ ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ မဟုတ်မဟတ် လုပ်ဇာတ်ကို ထပ်ပြီး နောက်က လိုက်ခင်းကြသေးတယ်။ Facebook မှာ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း၊ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်၊ ဟိုတယ်ခရီးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းနဲ့ ဦးကျော်စွာခိုင်တို့ ငါးဦး ပြုတ်ပြီး ဆိုတဲ့ သတင်းကို ခပ်တည်တည်နဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက လာတဲ့ သတင်းအရ သိရတယ်လေး ဘာလေးနဲ့ ကောလဟလ လုပ်ဇာတ်ခင်းကြသေးတယ်ဗျာ။"လို့ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက်ခေတ်မှာ သတင်းတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရပေမယ့်လည်း သတင်းတွေ က မမှန်တာတွေ များနေပါတယ်။ အတိုက်အခံဖက်မှ သတင်းတင်တဲ့လူတွေကလည်း နားစွန်နားဖျား ကြားတာကို အဟုတ်မှတ်တင်နေကြပြီး အဲဒီ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ သတင်းအပေါ်မှာလည်း တာဝန်ယူမှု လုံးဝ မရှိကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ သတင်း က မှားသွားရင်လည်း ပြန်လည် တောင်းပန်မှုမရှိပဲ ဖာသိဖာသာ နေနေတတ်ကြပါတယ်။ အတိုက်အခံဖက်မှာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လွှင့်နေသမျှ သတင်းတွေကို မှန်သင့်ကြောင်းနဲ့ သတင်းဖတ်သူတွေကို လေးစားသင့်ကြောင်းကို ဝါရင့်သတင်းစာ ဆရာကြီး တစ်ဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။"ဒီနေ့ ခေတ်က အင်တာနက် ခေတ်ဆိုတော့ သတင်းက အရမ်းမြန်တယ်၊ သတင်းမြန်တာ သိပ်ကောင်းပေမယ့် သတင်း မမှန်တာက သိပ်ဆိုးတယ်.... အထူးသဖြင့် အစိုးရအတိုက်အခံ သတင်းလွှင့်သူတွေရဲ့ သတင်းတွေကို လေ့လာကြည့်ချိန်မှာ သတင်း ၁၀ ခု မှာ ၉ ခု က အမှားတွေ ဖြစ်နေတယ်... ဒါက စာဖတ်သူတွေကို မလေးစားတာပဲ... သတင်းသမားဆိုတာ ဒီလိုမလုပ်ရဘူး... ကိုယ်တင်တဲ့သတင်းကို ၁၀၀% တာဝန်ယူရမယ်၊ ပြီးတော့ မှားသွားရင်လည်း ပြန်တောင်းပန်နိုင်ရမယ်... စာဖတ်တဲ့လူတွေကလည်း အတိုက်အခံ မီဒီယာ တွေရဲ့ အကျင့်ပျက်နေတာတွေ၊ မတရားသဖြင့် သတင်းမှားတွေ ထုတ်လွှင့်နေတာတွေကို ဒီတိုင်း ဆက်ပြီး လွှတ်မထားရဘူး... မတရားတာကို မတရားဘူးလို့ ပြောရဲရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လည်း ပြောဖူးတာပဲ... မဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ပြောရဲရမယ်၊ အမှားတွေ ဆက်မလွှင့်ဖို့ ပြောရဲရမယ်... သတင်းဌာနတွေကလည်း ပိုက်ဆံရဖို့ ဆိုတာထက် ကိုယ့်အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားရမယ်...." လို့ ပြောပါတယ်။အတိုက်အခံသတင်းမီဒီယာတွေ အားလုံးဟာ အစိုးရသစ် မတိုင်ခင်ကတည်းက အစိုးထဲမှာ ပြိုကွဲနေကြောင်း၊ စစ်တပ်က ပြိုကွဲနေကြောင်း၊ ဦးမောင်အေး ကို ဦးသန်းရွှေ က အနားပေးလိုက်ကြောင်း၊ ဦးမောင်အေးက အာဏာသိမ်းတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးမျိုး မဟုတ်တာတွေ အမြဲ လွှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာလဲ အစိုးရအဖွဲ့မှာ သဘောထား တင်းမာသူတွေနဲ့ ပျော့ပြောင်းသူတွေ ဆိုပြီး နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေကြာင်း သတင်းတွေကို အခြေအမြစ် တိတိကျကျ မရှိပဲ လွှင့်နေကြပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိုက်အခံ ပါတီပျက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီ တွင်းမှာ လောလောဆယ် မှတ်ပုံတင်လိုသူတွေနဲ့ မှတ်ပုံ မတင်လိုသူတွေ ဆိုပြီး လူသိရှင်ကြား မြိုင်မြိုင်စိုင်စိုင် နှစ်ခြမ်းကွဲနေတာကိုတော့ အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခြင်း မရှိကြပါဘူး။NLD က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်ရောက်မလာခင်က မှတ်ပုံတင်လိုသူများနဲ့ မတင်လိုသူများ ဆိုပြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အဘိုးကြီး အဖွားကြီး အများစုက မှတ်ပုံမတင်လိုကြပဲ လူငယ်တွေက မှတ်ပုံတင်လိုကြကာ NLD က နေ ခွဲထွက်သွားကြပါတယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းက ကျန်ခဲ့တဲ့ NLD တစ်ဖွဲ့သားလုံးက NDF နဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေ တို့ကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြမ်းတိုက်မည့်သူတွေ၊ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ နောက်က ဖြတ်လျှောက် သူတွေ ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ့ လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုကျတော့လည်း NLD ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြမ်းတိုက်ဖို့ ကို သဘောထားကွဲနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ပြန်လာလာချင်းမှာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး လို့ အော်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အမျိုးသားကို ရင်ကြားမစေ့နိုင်ပဲ လောလောဆယ် သဘောထား ကွဲနေတဲ့ NLD ကို ရင်ကြားစေ့နေရပြန်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိုက်အခံ မီဒီယာတွေဖက်က အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြမှုတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ABSDF ၂၃ နှစ် ပြည့်တာကို ဖော်ပြခဲ့ကြပေမယ့်၊ ABSDF နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းအကြောင်းတွေ၊ ဘာကြောင့် နှစ်ခြမ်းကွဲ ရခြင်းအကြောင်းတွေကို တော့ ထိန်ချန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့ ဒီနေ့ ကြွချီလာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ရဲ့ စွယ်တော်မြတ် အကြောင်း သတင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာ သတင်းကို ဘယ်မှာမှ မဖော်ပြပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းဆိုပေမယ့်လည်း အစိုးရနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ ရဲ့ ကောလဟာလတွေနဲ့ အတင်းတွေ၊ အစိုးရ အတိုက်အခံတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို လူအများက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကြတာကြောင့် သတင့်ဖြန့်သူများအနေနဲ့ ပရိတ်သက်အကြိုက်ကိုလိုက်ကာ ဖြန့်ပေးနေရကြောင်းကို အခကြေးငွေယူကာ ဝါဒမှိုင်းတိုက် သတင်းဖြန့်ပေးနေသူ ဗမာ့သွေး က အခုလို ပြောပါတယ်"ဒီနေ့ အင်တာနက် သုံးသူတွေက hot news ကို ပဲစိတ်ဝင်စားတာဗျ.. ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ပရိတ်သက်အကြိုက်ကို သိရတယ်... ကိုယ်တိုင် သတင်းစုံစမ်းပြီး သတင်းဖြန့်တဲ့လူတော့ ဒီလောကမှာ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးပေါ့.. ဒီလိုပဲ ဟိုက ရေးထားတာ ပြန်ကူး၊ ဒီကရေးထားတာ ပြန်ကူး လုပ်ရတယ်... ပြီးတော့ အစိုးရမီဒီယာဆိုတာမျိုးက ဦးကျော်ဆန်း မျက်နှာလောက်ပဲ ကြည့်ရတာ ... ကျွန်တော်တို့က လူတကာမျက်နှာကို ကြည့်နေရ၊ ကြောက်နေရတာဗျ.... လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ဆိုပေမယ့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်တဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးနှစ်လုံးလောက် ပါသွားရင် ဖုန်းနံပတ်ပြော၊ လိပ်စာပြော လာသတ်မယ် ဆိုပြီး ချိန်းခြောက်တာတွေ ခံရတယ်... ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်အတွက်တော့ ကိုယ့်စီးပွားရေးကို အထိခိုက်မခံနိုင်သလို မိုက်ရူးရဲတွေကိုလည်း ကြောက်ရတယ်..." လို့ပြောပါတယ်။ကျေးစေတမန် ဘလော့မှာတော့ "တော်တော်ကို ရီစရာကောင်းတဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနနဲ့ ပြည်ပက ခေတ်သစ် သူတောင်းစားတွေလို့ ပြောရမှာပဲ။ လုပ်ကြံ လီစယ်စရာ သတင်းတွေ မျိုးစုံ ရှိပါတယ် ဒီလို မသေမချာ မရေမရာနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ သတင်းကို အတင်းဇွတ် အမှန်လိုလုပ်ပြီး ဟိတ်ဟန် အပြည့်နဲ့ ပြည်သူကို သတင်းထူးတွေ သတင်းဦးတွေ ပေးနေသလို လုပ်နေတဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနနဲ့ ပြည်ပက မြန်မာအစိုးရ မကောင်းကြောင်း တွင်တွင် အော်နေတဲ့ စိတ်ထားမှန်ဟာ ဒီလို အလိမ်ဇာတ်ကွက်ထွင် သမားတွေပါလားလို့ အခုသတင်းက သက်သေ ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဧရာဝတီ သတင်းဌာန၊ ဒီမိုဝေယံ ဘလော့ဂ်နဲ့ အဲဒီလူစုက Account ဖွင့် သုံးစွဲနေတဲ့ Facebook တွေမှာ တောင်စဉ်ရေမရ ထင်ကြေး ဇာတ်လမ်းတွေ လုပ်ကြံထုတ်လွှင့်နေတာကို ယခု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းရဲ့ သတင်းက သက်သေပြလို့နေပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အတိတ်ကာလက လုပ်ကြံသတင်းတွေနဲ့ ပြည်သူကို လှည့်စားလိုက်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူကို ရန်တိုက်ပေးလိုက်၊ တိုင်းရင်း သားတွေ အချင်းချင်းကြား သွေးခွဲသပ်လျှို ၀ါဒဖြန့်လိုက်၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်းများကြား ထင်ယောင်ထင်မှား သတင်းများ ထုတ်လွှင့်လိုက်နဲ့ လုပ်ကြံသတင်းတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေတဲ့ မုသားလက်နက်ကိုင် ပြည်ဖျက် သမားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ပြောသမျှ သူတို့နှပ်ကြောင်း ပေးသမျှ ယုံမှတ်လို့ လိုက်လုပ်ကြ ပြောကြဆိုကြ အထင်အမြင်တွေ လွဲကြမယ်ဆိုရင် ဒေ၀ဒတ်ကို ဆရာတင်တဲ့ အဇာတသတ် ထက်ပင် ပိုပြီး ဒုက္ခတွေ့ ဖို့သာ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။""ယခုလို နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန အသီးသီးမှာရှိတဲ့ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များက အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း နေချိန်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ အင်တာနက်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ တင်ပြီး မြန်မာပြည်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတွေကို အခြေအမြစ်မရှိ၊ တိကျသေချာမှု မရှိဘဲနဲ့ စိတ်မှန်းနဲ့ ပြောဆိုနေမှုများဟာ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ့်ဘာသာ ဖော်ပြနေတာသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ အချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ယခင်က လုံးဝဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံများကတောင် အားပေး ထောက်ခံနေတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူး မရှိ၊ မြန်မာပြည်သူများ အတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးမရှိဘဲ ရေရာသေချာမှု မရှိတဲ့ သတင်းတွေကိုတင်၊ မိမိတို့ စားဝတ်နေရေး ဖူလုံရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မှန်တာမမှန်တာ ဝေဖန် သုံးသပ်မှု မရှိဘဲ ပြောချင်တာပြော နေကြတဲ့ သူများကို ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ် ပြန်မြင်အောင် ကြည့်ကြပါအုံးလို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။" ရေးသား ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။အတိုက်အခံ သတင်းလွှင့်သူများအနေနဲ့ သမှားတွေ ထုတ်လွှင့်မှု ကြောင့် လူထု က စိတ်ပျက်နေကြပြီး ဘီဘီစီ သတင်းနဲ့ လူထုကြား ဖြစ်နေတဲ့ ပဠိပက္ခအပါအဝင် အမျိုးသားရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ တခြားသတင်းတွေကို ထိန်ချန်ထားခြင်းတွေကြောင့် လူထုက တင်းမာနေကြောင်း သိရပါတယ်။Myanmar Express
ကဲ.. အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူး.. တစ်ခုခုကိုသာ အမြန်ရွေးတော့...
ရုရှားမှ မြန်မာကျောင်းသားများ အဆောင်မှာ စည်းမဲ့ကမ်...
သမိုင်းထဲက သူရဲကောင်းတွေက ဒီကနေ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ လေ...
သတင်းလိမ်မှုများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှသံရုံး...
နိုင်ငံရေးသမားအားလုံး လူထုချဉ်ဖတ်ဖြစ်တော့မယ် (ပေးစ...
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကမ္ဘာကြီးကို စောင့်လျှောက်ဖို...
အမြဲတမ်းမှားနေတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က အတိုက်အခံတို့ရဲ့ သတ...
ကဲ.. အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူး.. တစ်ခုခုကိုသာ အမြန်ရေ...
ခွေခေါက် ၍ သိမ်ဆည်း ထားနိုင်သော နိုကီယာ စမတ်ဖုန်း
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကတည်း Nokia မှ Concept အနေနဲ့ ဒီဇိုင်းပြပွဲမှာ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ဖူးတဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ UK ကိန်းဘရိတ်ခ်ျတက္ကသိုလ် နဲ့ Nokia နည်းပညာ သုတေသန ဌ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြည့်တန်ဆာဈေးကွက် ဖော်ဆောင်မည်
"ပြည့်တန်ဆာတွေကို လိုင်စင် ထုတ်ပေးပြီး တော့ စနစ်တကျနဲ့ လုပ်ဆောင် စေချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ် လို့လဲ ဆိုတော့ လိုင်စင် ထုတ်ပေးရင် စနစ် တကျနဲ့ အ...
လူသတ်၊ မီးရှို့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထွက်ပြေးသည့် ဘင်္ဂါလီ ၁၀၀၀ ကျော်ကို အိမ်ထောင်စုစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်
ရခိုင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်အတွင်း လူသတ်၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက် ကျူးလွန်သူ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး ၁၀၀၀ ကျော်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိ...
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၀ါရှင်တန်တွင် မိန့်ခွန်းပြောမည်
ပြပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ သမိုင်းဝင် အမေရိကန် ခရီးစဉ်အတွင်း ၀ါရှင်တန်၌ မိန့် ခွန်း ပြောကြားမည်ဟု Channel News Asia သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ...